FAQs - Shandong Dassaw Kunze uye Export Co, Ltd.
Runhare / Wechat / Whatsapp: +86 13165410090
Bhodhoro reMvura Preform
Ndeipi MOQ yechigadzirwa chako?
Chigadzirwa chega chega chine MOQ yayo, ndapota taura nesu kuti tikutumire ruzivo.
Unogamuchira zvakagadziriswa mirairo here?
Hongu, hongu, tinogona kupa OEM neODM zvakare. Ndokumbirawo kuti mutipe nemutsa sampuli dzenyu kana kudhirowa kuitira kuti tikwanise kuzviita sezvamunoda.
Ndeipi yakajairwa lead nguva?
Anenge mazuva manomwe, zvinoenderana neodha yako yakawanda.
Unogona here kupa muyenzaniso?
Ehe. Isu tinogona kupa yemahara sampuro (kana iri muchitoro) uye mutengo wekutumira unofanirwa kupihwa nemutengi.
Ndingawana mazuva mangani mazuva?
Mukati mevhiki rimwe mushure mekusimbiswa kwemifananidzo, iwo masampuli anogona kutumirwa kunze.
Sei uchitisarudza isu?
Tine fekitori redu pachedu, zvikamu zvakatsiga mudura, tsigiro sampuro kugadzirisa uye kugadzira maererano nevatengi sampuli. Zvese zvigadzirwa zvichaedzwa zvakanyatso kuvezwa kuti zvese zvakakwana mumamiriro.
Ndeipi nguva yekubhadhara?
Kazhinji T / T 50% sedhipoziti, patakapedza kuburitsa uye kurongedza, isu tinopa mutengi pikicha yezvinhu uye pasuru. Wobva mutengi abhadhara iyo 50% chiyero.
Shangair High Pressure Compressor Nyanzvi yePET Bhodhoro Blowi ...
09WM ： Simba reMweya: 1.0 ~ 1.2Nm3 / min Mhepo Inomanikidza: 3.0Mpa Magetsi Simba: 15HP (11KW) ~ 20HP (15KW) Model Mhepo kuburitsa （Nm3 / min） Mhepo kuburitsa Pressure (Mpa) mota simba (kw) Kurema (kg) Kukura L × W × H (mm) 09WM-1130 1.0 3.0 11 670 1520 × 800 × 950 09WM-1130H 1.2 3.0 ...
Kushanda Musimboti weSemi-otomatiki Bhodhoro Inoridza Muchina
Ridzai michina yekuumba ine maviri maburi, iyo nyowani modhi yekambani yedu, ndiwo maviri-nhanho muchina unoshandiswa preform yePET, PP mabhodhoro, uye yekufemera emamineral emvura mabhodhoro, mabhodhoro ezvinwiwa nemimwe midziyo ine yakaoma. Rotary michini hita anoshandiswa kudziyisa bhodhoro prefor ...
M-mhando Yakapikiswa Yakadzikama Kudzorera Mafuta emahara Kumanikidza Mhepo Comp ...
M-mhando Yakapikiswa Yakadzikama Kudzokorodza Oiri yemahara Kumanikidza Mhepo Compressor ndeye nyowani yepamusoro lever nhevedzano. Kufananidza neyakajairwa compressors, Iyi oiri yemahara compressor ine zvakwakanakira kushanda pasina vibration; hapana chikonzero che s ...
Runhare: +86 13165410090
Kamuri 702A, Chikamu 2, Bidg6, HongKong Int'l Nharaunda, NO.153 Wuyingshan Middle Road, Tianqiao Dunhu, Jinan City